Holandey-Iraniana maty novonoina tany Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, 한국어, Shqip, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Español, English
Raha ny fahitan'i Holandy sy ny vaovaon'ny haino aman-jery iraisam-pirenena azy, dia maty novonoina tany Iran ny Holandey-Iraniana Zahra Bahrami taorian'ny nahitana fa meloka izy noho ny heloka be vava amina rongony ary nahazo didy fanamelohan-ko faty tamin'ny 2 Janoary. Nogadraina izy tamin'ny 27 Desambra 2009 raha izy nanatrika ny fihetsiketsehana fanoherana ny governemanta nandritra ny fitsidihana an'i Tehran araka ny vaovao voaray.
Nanoratra taratasy ho an'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny Holandey [en] tamin'ny Septambra 2010 ny fanentanana mitaky ny famoahana ireo gadra politika any Iran, izay natao hanaitra azy ireo hanao fangatahana amin'Iran ny hamotsorana an-dravehivavy. Nandray an-tanana ny raharaha Bahrami [nl] ihany koa ny sampana Holandey ao amin'ny Amnesty International ary nihevitra fa tsy fitsarana ara-drariny mihitsy no natao an'i Bahrami. Taninkeo maraina, nilaza vaovao izy ireo mikasika ny didy famonoan-ko faty azy eo amin'ny Twitter:
Nomelohin-ko faty nahantona tany Iran ny Holandey Iraniana Zahra Bahrami (tamin'ny alalan'ny [gazety Holandey] @nrc) #deathpenalty #bahrami
Nanao hetsika tamin'ity vaovao ity ihany koa ny mpampiasa Twitter Holandey.
Nanoratra [nl] i @voetvaeg :
TOHINA: mandritra izany, novonoin'i Iran tamin'ny alalan'ny fanantonana ny Holandey Zahra #Bahrami ! http://bit.ly/hKpnc5
Ny olona sasany toa an’ i @VrolijkRechts, kosa moa te hanao mihoatra kokoa noho ny hoe manao tweet [nl] fotsiny mikasika izany:
O rey olona, rahoviana isika no hihaona amin'ny masoivohon'i Iran hanandratra ny feontsika? Sa isika dia haneho fotsiny ny tweetntsika tezitra mikasika izany ? #Zahra #Bahrami
Ny sasany, sahala amin'ny @bobbraak, kosa dia miantso ny governemanta Holandey handray andraikitra [nl]:
Misy fiaramanidina mankany Tehran androany hariva amin'ny 5ora hariva. Ry Uri ô![anaran'ny Minisitry ny raharahambahiny Holandey], mbola manana fotoana betsaka ny masoivohon'ny Iraniana hanatratrarana an'io! #bahrami
@Leon_Bosma kosa dia manana fijery lavitra ny raharaha [nl]:
Tena fanalam-baraka loatra mikasika an'i #Bahrami izany. Raha tsy misy na inona na inona esorina mikasika ity raharaha ity, dia inona no mahatonga an'ity tranga famonoan'olona iray ity ho tena mavesa-danja raha oharina amin'ny 30 tany #Ezipta?
Kivy [nl] ihany i @BartNijman amin'ity tranga ity:
Raha tena heloka be vava ny heloka mikasika ny rongony any Iran, dia nahoana kosa izany no tsy ho ampiharina amin'ny vehivavy Holandey-Iraniana? #bahrami #iran
Naneho fihetseham-po avy amin'ny mpisolovavan'i Bahrami [en] ny Fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona hoe:
Tena tohina aho. Tena tsy nahalala momba izany mihitsy aho. Tokony nampahafantarin'izy ireo ny mpisolovavany aloha ny didy fanamelohan-ko faty, fa tena tsy azoko an-tsaina mihitsy izany. Tsy hitako izay ho lazaina. Fa fotsiny hoe tena tohina aho.
Tamin'ny Sabotsy tolakandro, nilaza [nl] ny gazety Holandey de Volkskrant fa nanamafy ny masoivoho Iraniana any Holandy fa tena efa novonoin-ko faty i Bahrami , ary niaraka tamin'izay dia novahan'i Nederlandy avokoa ny fifamatorana rehetra tamin'i Iran. Niantso ity tranga ity ho “fanalam-baraka, nataon'ny fitondrana barbariana” ny Minsitry ny raharaham-bahiny Holandey, Uri Rosenthal.
tenifototra Twitter : #bahrami